Madaxwaynaha Venezuela Oo ku Dhawaaqay Inuu sii Deyneyso 40 Siyaasi Oo la Xidh-xidhay Waqtigii Ololaha, | Awdalmedia.com
Madaxwaynaha Venezuela Oo ku Dhawaaqay Inuu sii Deyneyso 40 Siyaasi Oo la Xidh-xidhay Waqtigii Ololaha,
Xukumadda Venezuela ayaa shaaca ka qaadday iney oodda ka qaadeyso maxaabiis siyaasadeed iyo dad u ololeeya xuquuqda adanaha oo gaadhaya 40 oo bilooyin dowladda u xidhnaa .
Madaxweyne Nicolas Maduro ayaa hadalkaasi ka soo yeedhay cambaareyn weyn kala kulmay maadaamaa dadka la soo deynayo uu ku jirin siyaasiga caanka ah ee Leopoldo Lopez.
Lopez oo horay u soo ahaa duqa degmada Chacao ee ka tirsan magaalada Caracas waxay dowladdu xidhay afar sana ka hor, iyada oo lagu eedeeyey inuu soo qaban qaabiyey mudaharaadyo dowladda looga soo horjeedo.
Dadkaasi la soo deeynayo intooda badan ayaa waxay ku xidhan yihiin xaruunta dhexe ee mukhaabaraadka Booliska dalka Venezuela ee ku yaallo caasimadda dalka ee Caracas.
Sida oo kale dadkaasi xabsiga laga soo deynayo waxaa ka mid ah duqi hore ee magaalada San Cristobal, Daniel Cbllos.
Afhayeen dowladda Venezuela u hadlay ayaa wuxuu sheegay tallaabbadaasi iney tahay mid u gogol xaadheyso wadahadal lala yeesho mucaaradka qaaddacay doorashadi madaxweynaha ee bishi hore ka dhacday dalka Venizuela.